Apple Products | IPhone News (Pejy 6)
Powebeats Pro dia azo tehirizina izao, na dia any Etazonia ihany
Ny Powerbeats Pro dia efa misy famandrihana amin'ny alàlan'ny tranokala Apple any Etazonia amin'ny vidiny $ 249
Ny orinasan CounterPoint dia manamafy ny fanapahana ny varotra Apple Watch
Ny Apple Watch dia araka ny CounterPoint, ilay mibahan-toerana mazava amin'ny varotra smartwatch. Ny varotra dia mitombo kely kokoa noho ny vanim-potoana tamin'ny taon-dasa
Inona no azonao ampiana amin'ny watchOS 6? Mampiseho antsika vaovao mahaliana ity fotokevitra ity
Ny foto-kevitra WatchOS 6 dia mampiseho vaovao mahaliana sasany izay azo ampiana ao amin'ny Apple Watch OS
HomeRun dia hanampy lalan-kely sy fahasarotana izay hiova arakaraka ny ora antoandro
HomeRun dia manampy fiasa vaovao izay manatsara kokoa ny fahafaha-manaon'ity fampiharana ity hitantana HomeKit amin'ny Apple Watch anao.
Siri sy ny Google Assistant dia mitovy amin'ny fampiasana mpampiasa
Ny fandalinana iray natao tamin'ny Microsoft vao haingana dia nanambara fa i Siri sy Google Assistant dia ampiasain'ny mpampiasa amin'ny ambaratonga iray ihany, miaraka amin'ny Alexa aoriana lavitra.
Powerbeats Pro dia afaka alamina mialoha amin'ny 3 Mey
Manomboka amin'ny 3 Mey, ireo mpampiasa liana amin'ny fividianana Powerbeats Pro dia afaka manao izany, saingy tsy maintsy miandry ny 10 Mey vao handray azy ireo.
Amazon dia mbola miondrika amin'ny mozika mivantana ary afaka manomboka serivisy Hi-Fi
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny mozika streaming avy any Amazon dia manome soso-kevitra fa afaka manomboka serivisy Hi-Fi alohan'ny faran'ny taona izy io.
Ny fotokevitra iray dia mampianatra antsika izay mety hoentin'ny fiambenana manaraka 6 ho antsika
Mahazo ny iray amin'ireo hevi-dehibe voalohany amin'ny famantaranandro manarakaOS 6 isika: fiambenana vaovao Marvel sy Star Wars, app Nutrisien, Audiobooks, ary Shortcuts.
Surfer iray no niverina ny Apple Watch enim-bolana taorian'ny namoizany azy ary mbola mandeha izy io
Lazainay aminao ny tantaran'ilay mpialokaloka Robert Bainter, very ny Apple Watch izy rehefa nilalao onja ary tamin'ny 6 nisy olona nahita fa niasa izy ary niantso azy.
Ny Powerbeats Pro dia tsy misy afa-tsy amin'ny mainty
Amin'ny voalohany, ny Powerbeats Pro vaovao dia ho hita amin'ny mainty. Ny sisa amin'ny loko ivoara, moss ary navy dia tsy ho tonga raha tsy amin'ny fahavaratra.
macOS 10.15 dia mety ahitana asa fanamarinana vaovao ho an'ny Apple Watch, nampiana amin'ny fidirana na Apple Pay
Ny rakikira Lemonade an'i Beyoncé dia hamely ny Apple Music afaka andro vitsivitsy, miaraka amin'ny
Apple Music, toy ny sisa amin'ireo serivisy fandefasana mozika, dia hankafy ny rakikira Lemonade navoakan'i Beyoncé 3 taona lasa izay.
Gadona tsy ara-dalàna sy fampandrenesana ECG, inona izy ireo ary ny fomba fiasan'izy ireo
Izahay dia manazava izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Apple Warch Irregular Rhythm Notification sy ny ECG, momba ny inona izy ireo ary ny fomba fiasan'izy ireo
Raha manana Apple TV ianao dia afaka manavao amin'ny kinova 12.2.1
Apple dia mandefa kinova tvOS vaovao ho an'ireo mpampiasa ilay boaty ambony napetraka. Toa ny fanitsiana bibikely no tena antony
Apple dia manala ny atiny ao amin'ny Apple Music any Shina taorian'ny baikon'ny governemanta
Efa manakaiky ny faha-30 taonan'ny fandripahana tao amin'ny Kianja Tiananmen ary tian'ny governemanta ny hilamina ny zava-misy eo amin'ny mponina ao aminy.
Vola mitentina 500 tapitrisa dolara no lanin'ny Apple Texture
Ny vidin'ny fividianana Texture, ilay antsoina hoe Netflix an'ny magazine, dia mitentina 500 tapitrisa dolara.
Apple dia mandefa toerana vaovao miaraka amina tanjona hividianana tadiny bebe kokoa ho an'ny Apple Watch
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia mandefa doka vaovao hampiroborobo ny fehin'ny Apple Watch, ny fomba tsara indrindra anaovana manokana ny famantaranandrontsika.
Ny ECG dia manohy gaga ny olona tsy mino indrindra amin'ny fahombiazany [tranga tena izy]
Ny electrocardiogram miaraka amin'ny Apple Watch Series 4 dia afaka mamantatra ny fibrillation atrium ary asehontsika amin'ny tranga tena izy
Azonao atao ny mampandeha ny Apple Card ara-batana amin'ny iPhone
Voasivana ny fomba fizotran'ny fampandehanana ny Apple Card ara-batana vaovao amin'ny fitaovantsika. Asehonay anao ny dingana rehetra izay tsy maintsy hataonay.
83% amin'ireo tanora amerikana no manana iPhone ary 20% mikasa ny hividy Apple Watch
Ny fanadihadiana farany nataon'i Pipper Jaffray an'ireo tanora amerikana dia taratry ny isa mahaliana momba ny laharam-pahamehana amin'ity fiarahamonina ity.
Apple manakarama injeniera Google AI hafa
Ian Goodfellow, rain'ny tambajotram-pifandraisana antagonista, dia niditra tao amin'ny mpiasan'ny injenieran'ny Apple, ary avy amin'ny Google.
Olona 200.000 XNUMX no efa mitsapa ny serivisy vaovao Apple News +
Ny serivisy famandrihana magazay an'i Apple, Apple News +, dia nahasarika ny sain'ny olona mihoatra ny 48 tao anatin'ny 200.000 ora fotsiny.
Ny efijery an'ny Apple Watch Series 5 dia novokarin'i Japan Display
Japan Display no mpanamboatra izay tompon'andraikitra, saika manokana fotsiny, amin'ny fanamboarana ny efijery amin'ny taranaka manaraka amin'ny Apple Watch
Ny doka vaovao nataon'i Apple dia mampiseho ny fahaizantsika mamokatra amin'ny asany miaraka amin'ny vokariny
Ny tovolahy avy any Cupertino dia manizingizina fa mampiasa ny fitaovan'izy ireo any am-piasana miaraka amin'ny doka vaovao izay milaza amintsika ny tombony rehetra amin'ny famokarana.
Swatch dia mandresy ny fitoriana an'i Apple amin'ny teny filamatra "mifidy"
Ilay mpanao famantaranandro Swatch, dia nandresy ny fitoriana napetrak'i Apple hanohitra azy noho ny fampiasana ny teny filamatra "Tick Different"
Apple Music dia hifanaraka amin'ny Chromecast tsy ho ela, farafaharatsiny ny kinova ho an'ny Android
Ny serivisy mozika mivantana an'i Apple dia mety hifanaraka amin'ny Chromecast, farafaharatsiny ao amin'ny kinova Android.
Counter Point dia nilaza fa nahatratra 60% ny tsena AirPods
Ny orinasa Counter Point dia mampiseho fandinihana izay ilazany amintsika fa nahatratra 60% ny tsena AirPods
Ny AirPods an'ny taranaka faharoa dia eo am-pelatanan'ny iFixit. Mazava ho azy fa tsy azo amboarina ireo headphone vaovao ireo
Ny fampiharana TV dia ho hita ao amin'ny Apple TV andiany faha-3 ihany koa
Ny Apple TV andiany faha-3, fitaovana iray izay nahatratra ny tsena tamin'ny taona 2012, dia hifanaraka amin'ny fampiharana TV vaovao an'ny Apple ihany koa.
Ny ECG an'ny Apple Watch dia misy any Espana izao. Fa inona ary ary inona no ilana azy?
watchOS 5.2 sy iOS 12.2 mampihetsika ny asan'ny ECG any Espana. Inona ny atao hoe ECG? Fa inona izany? Ahoana ny fomba fiasany amin'ny Apple Watch? Izahay dia manazava aminao ny zava-drehetra.
Ny keynote "Fotoana aseho" izao dia azo jerena ao amin'ny YouTube
Raha te-hahita ny keyonte fampisehoana ireo serivisy Apple vaovao ianao dia azonao atao mivantana amin'ny alàlan'ny fantsona Apple ao amin'ny YouTube.
Ireo ny vaovaon'ny HomePod ao amin'ny kinova 12.2 vaovao
Ny HomePod koa dia nahazo kinova vaovao, amin'ity tranga ity 12.2 miaraka amina fanatsarana vitsivitsy nefa manan-danja.
Ny CEO an'ny Goldman Sachs dia manamafy fa ho tonga any Espana ihany koa ny Apple Card
Tsy maintsy miandry isika hijery ny fomba fandraisana ny Apple Card any Etazonia, fa aorian'ity fanombohana ity dia mikasa ny handefa azy erak'izao tontolo izao i Goldman Sachs.
Ireo no magazine rehetra hitantsika ao amin'ny Apple News +
Raha mikasa hampiasa ny serivisy famandrihana magazine Apple ianao, Apple News +, dia fantaro mialoha izay famoahana ho hitanao.
Apple dia nanonona ny anarana hoe Apple TV ho an'ny Apple TV HD
Taorian'ny fanombohana ny Apple TV + vaovao, nanapa-kevitra ireo tovolahy avy any Cupertino fa tsy hotadiavina amin'ny Apple TV HD intsony ny taranaka fahefatra.
IOS 12.2 sy watchOS 5.2 dia hitondra ny ECG an'ny Apple Watch ho any Eropa
iOS 12.2 sy watchOS 5.2 dia toa manokatra ny fampiasa ECG izay mbola tsy azo nampiasaina tany ivelan'i Etazonia niaraka tamin'ny Apple Watch Series 4
Apple TV + dia serivisy video streaming an'i Apple
Taorian'ny tsaho efa ho roa taona dia nanolotra ny serivisy video streaming i Apple fotoana fohy taorian'ny fampidirana ny ...
Gaga i Apple tamin'ny fampandehanana ny Keynote mivantana, ary nihomehy anay izy ireo ...
Ireo bandy ao Apple dia mamoaka ny vazivazy manokana ananany ary mampandeha ny streaming Keynote amin'ny fampisehoana ny Steve Jobs Theatre miaraka amin'ny CarPlay eo amin'ny efijery.
Arovy ny Apple Watch anao miaraka amin'ny tranga Fiarovana amin'ny Catalyst Impact Protection
Notsapainay ny tranga Apple Protection Catalyst Impact Protection Case, fomba iray hiarovana ny Apple Watch anao ary mitazona hatrany ny asany rehetra.
Apple dia hampiditra fonosana fantsona ao amin'ny serivisy streaming
Apple dia hampiditra fantsona antoko fahatelo ao amin'ny serivisiny streaming izay azontsika atao mba hanamboarana ny serivisy fahitalavitra an-tsika manokana
Ny fandefasana ny AirPods faharoa dia ahemotra ho amin'ny volana aprily any Etazonia
Ny fandraisana ireo AirPod vaovao dia tsara loatra ka any Etazonia dia mila miandry ny volana aprily isika vao handray azy ireo.
Ny fampiharana ny hetsika amin'ny Apple TV dia vonona izao
Apple manavao ny fampiharana app amin'ny Apple TV hanaraka ny teny fototra amin'ny fandefasana ny alatsinainy 25 martsa ho avy izao
AirPods vaovao misy famahanana tsy misy tariby sy "Hey Siri"
Apple dia manana telo amin'ny telo amin'ity herinandro ity, mampiditra iPads vaovao amin'ny Alatsinainy, iMac vaovao, amin'ny talata ary, anio Alarobia, vaovao ...
Ny beta farany iOS dia mampiseho ny fifanarahan'ny AirPower
Taorinan'ny fampisehoana diso ny fametahana ny volan'ny Apple, ny AirPower, izay mamela ny fametahana miaraka ny telo ...
Rehefa afaka roa andro ny fanavaozana ny vokatra ao amin'ny tranokala Apple dia tsaho fa rahampitso dia mety ho anjaran'ny iPod Touch. Mino izany ve ianao?
Ny mpandalina dia tsy mazava amin'ny drafitra Apple momba ny serivisy VOD
Raha sendra misy ny fanontaniana dia manamafy ny CEO an'ny Netflix fa tsy mikasa ny hiara-hiasa amin'ny serivisy horonantsary streaming an'i Apple izy
AppleCare + misy any Espana
Apple nanampy AppleCare + ho an'ireo mpampiasa any Espana. Amin'ity AppleCare + fanapahana efijery ity ankoatran'ny fahasimbana hafa dia rakotra
Apple dia manolotra ny iPad Air vaovao sy iPad Mini nohavaozina
Apple dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny iPads vaovao amin'ity taona ity: ny iPad Air 10,5-inch ary ny iPad mini nohavaozina mifanentana amin'ny Apple Pencil
Ny fandinihana iray miaraka amin'ny Stanford University dia mampiseho ny maha-mahasoa ny Apple Watch mba hahitana arrhythmia
Apple sy Stanford dia namoaka ny valin'ny fanadihadiana iray manombatombana ny maha-azo itokisana ny Apple Watch amin'ny fitiliana ireo arrhythmia
Apple Video dia hanana atiny maimaimpoana ihany koa ho an'ny mpanjifa Apple
Ny sarin'i Apple momba ny serivisy fitakiana dia hapetraka, mety ny alatsinainy 25 martsa ...
Apple Music dia tonga amin'ny Amazon Fire TV any Etazonia, havoaka tsy ho ela any amin'ny firenena hafa
Taorian'ny famoahana ny Apple Music ho an'ny Amazon Echo, gaga ireo tovolahy avy any Amazon tamin'ny alàlan'ny fampandehanana ny fahaizan'ny Apple Music ho an'ny Amazon Fire TV.
HBO, Showtime ary Starz no ho sandan'ny Apple ho an'ny serivisy fandefasana azy
Ny serivisy video streaming an'i Apple dia mety ho avy amin'ny tanan'ny HBO, Starz ary Showtime hiaraka amin'ny atiny voalohany.
Apple Music dia tsy hitaraina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ho an'ny artista any Etazonia
Ireo tovolahy avy ao amin'ny Apple Music dia nanamafy fa tsy hitaraina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ho an'ny artista any Etazonia izy ireo satria manao ny serivisy hafa.
Ahoana ny fomba hijerena, hanafoanana na hanovana ny famandrihanao amin'ny Apple TV
Hofoanana, tantano ary zahao ireo famandrihana samihafa anananao ao amin'ny Apple ID anao avy amin'ny Apple TV
Apple dia mety hanana hetsika tsy nampoizina hanombohana ny fitaovany amin'ny 5G
Taorian'ny MWC 2019 voamariky ny fitomboan'ny haitao 5G, ny drafitr'i Apple dia toa tsy voafaritra taorian'ny olana mahazo ny mpamatsy azy.
Misy ny mpamokatra Hollywood milaza fa tsy avelan'i Apple hiasa malalaka izy ireo
Araka ny indostrian'ny Hollywood, Apple dia tsy manome fahalalahana ilain'ny agents sy ny mpamokatra hamorona atiny.
Mety ho ilay fiambenanaOS 6 manaraka izay tadiavinao ao amin'ny Apple Watch anao
Nanomboka nahita ny hevitra voalohany izahay momba ny mety ho toetran'ny watchOS 6 manaraka, ny rafitra fiasa manaraka ho an'ny Apple Watch.
Ahoana ny fampiasana AirPods sy headset Bluetooth hafa amin'ny Apple TV
Iray amin'ireo tombony lehibe atolotry ny Apple TV antsika raha oharina amin'ireo mpilalao haino aman-jery na televiziona hafa dia ny ...
Novonoin'i Siri ny jiro ao an-dakozia. Eny ary, dieny izao. Miala tsiny fa misy zavatra tsy mety. Andramo indray "
Siri dia mandefa hafatra tsy fahombiazan'ny Apple Watch rehefa angatahinay izy hanao hetsika miaraka amin'ny fitaovana mifanaraka amin'ny Homekit
Ny antsasaky ny varotra smartwatch amin'ny taona 2018 dia an'ny Apple Watch
Ny tsena smartwatch dia manana mpandresy mazava ary ity no Apple Watch. Nandritra ny taona 2018, nitaky 50 isan-jato mahery ny tsena rehetra
Apple Music dia tsy hahatratra ny Google Home amin'ny farany
Eo afovoan'ny Mobile World Congress 2019 izahay ary toa tsy afaka manavaka ny vaovao ofisialy sy ny ...
Araka ny Bloomberg dia hanana fampiharana manerantany ho an'ny iOS sy macOS isika amin'ny 2021
Ny data voalohany momba ny mety fampifanarahana eo amin'ny macOS sy ny iOS dia manomboka fantatra, ny fampiharana manerantany dia ho tonga amin'ny taona 2021.
HomePods dia mahavita mampitombo ny varotra araka ny tatitry ny Strategy Analytics
Ny HomePod dia manohy manampy mpampiasa na eo aza ny iray amin'ireo mpandaha-teny lafo vidy indrindra ananantsika eny an-tsena. Mitombo tsikelikely ny varotra
Apple dia handefa ireo AirPod vaovao miaraka amin'ny AirPower amin'ity tapany voalohan'ny taona 2019 ity
Mitohy ny tsaho fa efa vonona ny zava-drehetra amin'ny fanombohana ny AirPods sy ny AirPower vaovao mandritra ity tapaky voalohan'ny taona 2019 ity.
Apple mividy fampiharana feo PullString hanatsarana ny Siri
Ny orinasa monina ao amin'ny Cupertino dia nividy ny startup PullString hanatsarana ny fiasa sy ny fahombiazan'ny Siri amin'ny kinova ho avy amin'ny rafitra fiasa.
Apple Music izao dia mamela antsika hanome famandrihana iray volana ho an'ireo namantsika
Tsy ampoizina i Apple amin'ny alàlan'ny fanentanana fanentanana vaovao hamelomana indray ny Apple Music: afaka manome iray volana maimaimpoana ho an'ny namantsika isika izao.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fampandrenesana isaky ny mandeha avy amin'ny Maps amin'ny Apple Watch
Azontsika atao ny mampihetsika na manafoana ireo fampandrenesana torolàlana isan-tsokajiny momba ny Apple Watch isaky ny mila izany amin'ny toeran'ny Apple Watch
Ahoana ny fomba hampiasana na hanafoanana ny antso vonjy maika amin'ny Apple Watch
Asehonay aminao ny fomba ahafahanao mampihetsika haingana sy manafoana ny safidin'ny antso vonjy maika amin'ny Apple Watch anao
Ahoana ny fomba hampiasana ny maody "mandeha ho azy aza manelingelina" mandritra ny fiofanana
Asehonay aminao ny fomba ahafahanao mampavitrika fa aza manelingelina maody mandeha ho azy rehefa manao fanazaran-tena amin'ny Apple Watch.
Apple Watch Manampy ny Vehivavy hahafantatra fa manana Tachycardia supraventricular izy
Noho ny Apple Watch dia nahatsikaritra ny mpitsabo mpanampy iray any North Carolina fa manana fiakaran'ny fo avo izy, nanery azy hanatona ny dokotera ary hitady ny anton'izany.
Ny fivarotana Smartwatch dia niakatra 61% tamin'ny taona lasa
Rehefa mandeha ny taona dia lasa miha-mahazatra ny mahita ny smartwatches eo an-tanan'ny mpampiasa maro kokoa.
Tsy dia resy lahatra tanteraka amin'ny tolo-kevitr'i Apple ho an'ny famandrihana Apple News ireo mpanonta
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia eo am-panaovana fifampiraharahana ho an'ny serivisy famandrihana Apple News manaraka na dia tsy resy lahatra aza ireo mpanonta
Ny varotra sy ny fahalianana amin'ny AirPods dia mitombo hatrany
Tsaroako ny fanolorana ny AirPods miaraka amin'ny iPhone 7 sy iPhone 7 Plus. Taorian'ny fanesorana ny seranana ...
Nomad dia namoaka tady vaovao Titanium Band
Nomad dia orinasa manamboatra kojakoja ho an'ny fitaovana Apple ary amin'ity indray mitoraka ity dia manolotra ny Titanium Band, fehy mahatalanjona ho an'ny Apple Watch
Ny fangatahana ny tenimiafinao iCloud alohan'ny hangalaranao ny iPhone na ny phishing dia anisan'ny safidy be mpampiasa hamaha iCloud
Apple dia efa manana mpiasa miasa amin'ny modem manaraka an'ny fitaovany
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia efa vonona ho ekipa iray amin'ny fampandrosoana ny modemany (Apple) ho an'ny fitaovantsika finday.
Apple Music dia manararaotra ny Grammy Awards miaraka amin'ny Memojis vitsivitsy an'i Shawn Mendes, Ariana Grande, ary Kacey Musgraves
Apple dia nandefa fanentanana nahafinaritra nampiroborobo ny Apple Music misy Memojis avy amin'i Shawn Mendes, Ariana Grande, ary Kacey Musgraves ho an'ny Grammys
Afaka mampiasa ny karatra Banco Mediolanum amin'ny Apple Pay ianao izao
Apple Pay dia misy miaraka amin'ny karatra avy amin'ny banky mihoatra ny 20 any Espana ary iray hafa no navadika ...
Ny detector an'ny Apple Watch dia namonjy ain'olona hafa
Ny taranaka fahefatra an'ny Apple Watch, andiany 4, dia tsy midika fotsiny hoe fanavaozana hatsarana ny terminal (farafaharatsiny ao ...
Ity volana febroary ity dia manana fanamby ho an'ny hetsika miaraka amin'ny Apple Watch sy ireo fotoam-pampiofanana miaraka amin'ny Today at Apple
Apple dia nametraka tamim-pomba ofisialy ny fanamby vaovao ho an'ny Febroary izay misy ny fanidiana ny peratra fanatanjahan-tena mandritra ny herinandro hahatratrarana ny zava-bita
Manana Apple Music ve ianao ary handeha hiaraka amin'ny American Airlines? mifandray sy henoy ny mozikanao maimaim-poana
Ireo bandy ao amin'ny Apple Music dia miara-miasa amin'ny American Airlines hamela anay hampiasa ny Wi-Fi ao anaty fiaramanidina ary hihaino ny mozikantsika maimaimpoana.
Apple Music Tonga Mpanjifa 50 tapitrisa "Indray"
Apple Music dia serivisy mozika streaming an'i Apple izay nipoitra avy amin'ny Beats Music ary natolotra ...
Afaka mahazo Apple Watch Series 1 na 2 ianao raha tapaka ny Series 0 anao
Apple dia nandefa fanamarihana anatiny izay nanovan'izy ireo ny Apple Watch Series 0 ho an'ny maodely vaovao an'ny Apple Watch Series 1 na 2
Taorian'ny vokatra ratsy nataon'i Apple dia toa mbola tsy tonga ny ratsy indrindra ...
Ny mpandalina malaza Ming-Chi Kuo dia namoaka valiny tsy nahafa-po ho an'ny ankizilahy Cupertino tamin'ity telovolana voalohany 2019 ity.
Apple dia manakarama mpitantana bateria Samsung taloha hamolavola ny bateria manaraka
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia mandray ny lohan'ny bateria teo aloha tao amin'ny Samsung SDI miaraka amin'ny tanjona hanatsara ny batterie an'ny iDevices.
AirPods 2 ho an'ny tapany voalohany amin'ny taona 2019
Ny AirPods dia niaraka taminay nandritra ny roa taona mahery tsy nisy fanovana, na fanavaozana, na fihenan'ny vidiny bebe kokoa ...
Farany watchOS 5.1.3 manamboatra ny bug "manandratra hiresaka"
Toa kely talohan'ity fanavaozana farany ny watchOS ity ary tamin'ny fahatongavan'io Apple io ihany dia namaha ny olan'ny fananganana hiteny
Apple dia miara-miasa amin'i Johnson & Johnson hanatsara ny drafitra fahasalamana
Mba hanatsarana ny fanangonana angon-drakitra ara-pahasalamana Apple Watch, ny lehilahy Cupertino dia miara-miasa amin'ny orinasa mpitsabo Johnson & Johnson.
Tim Cook dia mizara ny tantaran'ny olona iray nahita fa ny fibrillation atrial dia noho ny Apple Watch
Tim Cook nisioka ny tantaran'ny olona farany nahita ny fomba namonjen'ny Apple Watch ny fiainany.
Araka ny filazan'ny mpivarotra isan-karazany, Apple dia mety miasa amin'ny taranaka fahafito an'ny iPod touch
Tim Cook dia "nisintona" ny anjara birikiny lehibe amin'ny fahasalamana ataon'izy ireo
Tim Cook dia miresaka momba ny fandraisana anjara lehibe amin'ny fahasalamana ataon'izy ireo
Ahoana ny fomba hamehezana ny Apple Watch handrefesana tsara ny fampihetseham-batanao
Apple dia namoaka manokana ilay clip video 'Who Cares' nataon'i Paul McCartney
Ny ankizilahy Cupertino dia namoaka manokana ny horonantsary ho an'ny mpitovo tokana an'i Paul McCartney, Who Cares, rakitsary miady amin'ny famonoana olona.
2018, taona iray izay tsy fantatsika na tadidintsika na hadino, dia efa hifarana ary afaka mametraka ny ...
WatchOS 5.1.3 sy tvOS 12.1.2 Beta XNUMX Azo alaina izao
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nandefa betas vaovao omaly an'ny rafitra fiasa rehetra izay mitantana ireo fitaovana izay ananany eny an-tsena amin'izao fotoana izao.
Volao amin'ny fivarotana Apple ofisialy tsy misy zanabola ny varotrao
Apple Pay dia tsy manjary mampiahiahy an'i Eropa
Apple Pay, rafitra fandoavam-bola amin'ny finday an'i Apple, dia fanamorana fanampiny ao amin'ny iPhone izay ananany ...
Apple Music indray afaka telo volana maimaim-poana (na dia efa nankafizinao aza izany fe-potoana fitsapana izany)
Ny beta voalohany an'ny iOS 12.1.2, warchOS 5.1.3 ary tvOS 12.1.2 dia azon'ny vondrom-piarahamonina mpamorona mifantoka amin'ny fanatsarana ny zava-bita.
Tsia, Apple dia tsy nametraka ny hadisoam-panentanana amin'ny watchOS 5.1.2
Ny fanovana ny faritra amin'ny Apple Watch dia tsy hampihetsika ny ECG vaovao ivelan'i Etazonia
Taorian'ny tsaho momba ny hitsin-dàlana mety ho an'ny geoblock an'ny ECG an'ny Apple Watch Series 4 dia voamarina fa tsy misy ny mety ivelan'ny Etazonia.
Ahoana ny fomba handraisana fampandrenesana momba ny tahan'ny fo amin'ny Apple Watch
Ahoana ny fomba handraisana fampandrenesana ny tahan'ny fo amin'ny Apple Watch mba hahafahany mamantatra ny tsy fetezan'ny fontsika
Ireo AirPod vaovao dia mety ho simetrika ary miaraka amina sensor kokoa ho an'ny fahasalamana
Apple Watch Series 3 dia manjaka amin'ny varotra araka ny IDC
Ahenao ny fanjifana bateria an'ny Apple Watch rehefa miofana ianao
Apple Music dia ho tonga amin'ny Amazon Echo
Vao nanambara i Amazon fa hankafy ny fifanarahan'ny Apple Music ireo fitaovany Echo malaza. Ity fifanarahana amin'ny Apple Music ity…
Ahoana ny fomba hifehezana ny fotoana fanarenana antsika avy amin'ny Apple Watch
iTunes Connect dia hikatona manomboka amin'ny 23 ka hatramin'ny 27 Desambra
Mampitandrina i Apple fa hakatona ny 23 hatramin'ny 27 desambra ny iTunes Connect
Akaiky ny asan'ny ECG, hohahetsika amin'ny watchOS 5.1.2
Ny kabary headphone vaovao an'i Apple dia hampiasa ny haitao an'ny HomePod
Ny patanty Apple dia maminavina fa ireo headphone ireo dia hankafy ny teknolojia manamboatra endrika mitovy amin'ny HomePod
Mipoitra ny tsaho momba ny Apple TV mora vidy kokoa
Hafiriana no tokony hiandrasantsika raha te hividy Apple Watch Series 4 isika?
Hafiriana no tokony hiandrasantsika raha te hividy Apple Watch Series 4 isika
Efa manana fitaovana Apple amidy any Amazon izahay
Taorian'ny vaovao momba ny fifampiraharahana dia tsy niandry ela ny lisitr'i Amazon ireo vokatra Apple marihina fa vokatra Amazon Prime.
Navoaka ny tahiry AirPorts sy Time Capsule
Nanambara i Apple tamin'ny volana aprily fa, rehefa tapitra ny tahiry ao amin'ny fivarotany, dia hatsahatra ireo maodely AirPort samihafa.
Ny pejy Apple dia manavao ny pejy vita amin'ny vokatra nohavaozina
Nanavao tanteraka ny famolavolana i Apple ary izao dia mankafy ny hatsarana mitovy amin'ny sisa amin'ny tranokala Apple ary mora ampiasaina ankehitriny.
Ny beta fahatelo an'ny iOS 12.1.1 sy tvOS 12.1.1 ho an'ny mpamorona ary ny faharoa amin'ny watchOS 5.1.2 dia misy ankehitriny
Ny beta fahatelo ho an'ny fanavaozana iOS 12 manaraka dia efa eo am-pelatanan'ny mpamorona, ary koa ny an'ny watchOS sy ny tvOS.
Ny fampielezan-kevitr'i Apple an'ny krismasy dia miaina miaraka amin'ny fotoana fiverenana maharitra
Amin'ireo fanomezana Krismasy novidianay tao amin'ny Apple, dia hankafy ny fotoana fiverenana maharitra hatramin'ny 20 Janoary izahay
Havaozina i Spotify amin'ny alàlan'ny fanampiana ny app ofisialy amin'ny Apple Watch
Apple dia manadihady ny "fihenan'ny" fijery Podcast
Avy amin'i Apple dia manadihady ny "fihenan'ny" reproductions of Podcast
Airpods no vokatra be mpividy indrindra Buy
Tsy misy fanavaozana ary tsy misy vaovao, roa taona taorian'ny nampidirana azy, ny Airpods no vokatra be mpividy indrindra amin'ny Best Buy.
"Fahasarotana" vaovao 7 no tonga ao amin'ny watchOS 5.1.2
"Fahasarotana" vaovao 7 no ho tonga amin'ny watchOS 5.1.2
Hanavao ny iPhone, Apple Watch na iPad anao amin'ireo fifanarahana eBay ireo
Mba hankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny fividianana, izay ankalazaina amin'ny 11-11, dia nanolotra tolotra mahaliana marobe tsy azontsika hadino ireo lehilahy ao amin'ny eBay.
Ny strap vaovao Hermès Double Tour sy Simple Tour dia misy izao
Ireo fehin-kibo vaovao ho an'ny Apple Watch, avy amin'ny mpanamboatra Hermès, dia efa misy ao amin'ny Apple Store.
Apple Maps dia mampiseho fampahalalana ao anatin'ny seranam-piaramanidina vaovao sy foibe fiantsenana
Ireo tovolahy Cupertino dia mbola miasa ao amin'ny Apple Maps ary nanitatra ny isan'ny toerana izay mampiseho drafitra anatiny.
Tonga any Alemaina ny Apple Pay
Ny zava-drehetra dia toa manondro fa efa akaiky ny fandefasana Apple Pay any Alemana ary mety hitranga izany ao anatin'ny ora vitsivitsy.
Efa misy ny beta Spotify ofisialy ho an'ny Apple Watch
Ny bug ao amin'ny watchOS 5.1 dia manery ny fisintonana ny fanavaozana ora maro aorian'ny famoahana azy
Taorian'ny fiandrasana sy ny tsy fahalalana an-taonany maro dia fantatsika ihany ilay mini Mac vaovao ary ireo no vaovao sy fiasa rehetra.
Mikatona ny Apple Store hiomanana amin'ny fahatongavan'ny iPad sy Mac vaovao
Toy ny mahazatra, ora maro alohan'ny fankalazana hetsika iray hanolotra vokatra vaovao, ny magazay an-tserasera ...
Ny famoahana ny andiany faha-4 dia namonjy ain'olona tany Suède
Ny sensor tamin'ny fianjeran'ny Series 4 dia namonjy ny ain'ny lehilahy iray avy any Suède izay nalemy noho ny fantsona tany an-damosina izay nalemy.
Manampy fampahalalana momba ny fitateram-bahoaka any Suisse ry zalahy Cupertino. Mandehana manodidina ny fitaterana rehetra any Suisse noho ny Apple Maps.
Ny HomePod dia efa amidy any Espana sy Mexico
Ny HomePod dia azo vidiana any Espana sy Mexico izao. Ny mpandahateny marani-tsaina an'i Apple dia miavaka amin'ny kalitaon'ny feo.
Tim Cook dia nitsidika ny fivarotana Apple ao Puerta del Sol
Ny tale jeneralin'ny Apple, Tim Cook, dia tao amin'ny Apple store any Puerta del Sol any Madrid androany.
Hitsahatra tsy hanohana ny safidin'ny fiarovana TSL 1.0 sy 1.1 ny Safari
Hatramin'ny volana martsa 2020, ny browser browser na amin'ny iOS na macOS dia tsy hanohana intsony ny protokol TSL 1.0 sy 1.1.
Teratany Celebgate vaovao no voaheloka noho ny maha-izy azy sy ny halatra angon-drakitra nataony ary voaheloka higadra 34 volana.
Apple dia afaka mandefa mini iPad vaovao amin'ity taona ity, ny base AirPower ary ny AirPods 2 ao anatin'ny volana vitsivitsy
Raha ny filazan'ny mpandalina Ming-Chu Kuo, ny orinasan-tserasera Cupertino dia afaka mampiditra taranaka vaovao, ny fahadimy, an'ny iPad Mini.
Apple dia afaka mamokatra andiana fahitalavitra miorina amin'ny 'Pachinko' bestseller
Tonga aty aminay ny vaovao fa nahazo ny zon'ny pachinko Apple i Apple mba hitondrany azy amin'ny andian-tsarimihetsika amin'ny tolotra horonantsary an-tserasera.
Miseho indray amin'ny Apple Watch ny telegram
Taorian'ny fisintomana ilay fangatahana ho an'ny Apple Watch nampiady hevitra dia naverin'ny Telegram tamin'ny Bera farany nataony tamina fahombiazana tena lehibe
Izay tsy hita ao amin'ny Apple TV hahomby amin'ny sehatry ny lalao video
Ny Apple TV dia tsy mamarana ny famolahana toy ny sehatry ny lalao video ary toa sarotra kokoa ny manatratra azy, na eo aza ny fahafaha-manao goavana.
Ny hetsika fampisehoana an'ny iPad vaovao dia halefa mivantana
Ny keynote amin'ny 30 Oktobra, izay hanoloran'i Apple ny iPad Pro vaovao sy ny fanavaozana ny MacBook Air sy Mac Mini, dia azo arahana mivantana ao amin'ny tranokalan'ny Apple.
Apple mandefa charger ho an'ny Apple Watch miaraka amin'ny port USB C
Apple dia mitsikera mafy ny volavolan-dalàna fanoherana ny encryption any Aostralia
Ny tolo-kevitry ny governemanta Aostraliana dia mety hampitsahatra ny fiarovana atolotry ny Apple antsika amin'ny fitaovany
TSMC no hiandraikitra ny fanamboarana manokana ny processeur A13 ho an'ny iPhone manaraka
Apple dia hatoky ny TSMC mandritra ny taona iray hamokarana ny taranaka manaraka amin'ny processeur izay hitantana ny iPhone sy iPad manaraka, ny A13
Hanome tononkira ho an'ny Apple Music i Genius
Genius no rakipahalalana mozika lehibe indrindra manome ny tononkira, ny tantara ary ny fahalianan'ny hira amin'ny serivisiny izay ho eo amin'ny Apple Music izao
Horonan-tsary detector Apple Watch Series 4 nianjera tamina manam-pahaizana manokana any Hollywood
Hanomboka amin'ny 12 Oktobra ny andiany faharoa amin'ny Carpool Karaoke
Ny vanim-potoana faharoa an'ny Carpool Karaoke dia efa misy daty famotsorana. Amin'ny 12 Oktobra izao vao afaka mankafy ireo fizarana vaovao isika.
Nanatevin-daharana ny seho Jimmy Kimmel Live ny Apple Music! hampiroborobo ny artista vao misondrotra amin'ny programa 'Up Next'
Ny bandy avy amin'ny Apple Music dia te hampiroborobo mpanakanto vaovao amin'ny seho Up Next miaraka amin'ireo tovolahy avy ao amin'ny The Jimmy Kimmel Live an'ny ABC!
Ahoana ny fomba hampiasana ny fanatanjahan-tena hafa izay tsy miseho amin'ny Apple Watch
Ny sasany an'ny Apple Watch Series 4 dia manana olana amin'ny famerenana indray
Ny mpampiasa sasany dia mitatitra lesoka iray izay mahatonga ny Apple Watch Seriesres 4 hanomboka indray rehefa mijery fampahalalana sasany momba ny valiny isan'andro.
Apple dia handray anjara amin'ny hetsika eran'izao tontolo izao The Big Draw miaraka amina sary manokana fanaovana sary ao amin'ny Apple Store
Apple dia manatevin-daharana ireo lehilahy avy amin'ny The Big Draw amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara amin'ny fotoam-pianarana sary amin'ny Apple Stores rehetra ao anatin'ny programa Today at Apple.
Ireto ny fampiasana 10 voalohany ampiasain'ny mpampiasa ny Apple Watch
Raha mbola manana fisalasalana ianao amin'ny amin'izay mety ilana ny Apple Watch, dia ho fantatrao amin'ity fanadihadiana ity hoe inona no fampiasana matetika indrindra an'ny mpampiasa
Apple dia mijanona ho orinasa manandanja indrindra manerantany amin'ny fahenina misesy
Nandritra ny taona fahenina nisesy, ny orinasa monina ao Cupertino indray no mitana ny lisitr'ireo orinasa sarobidy indrindra eran-tany.
Fetsy tena ilaina fito ho an'ny Apple Watch
Azavainay ny fiasa fito an'ny Apple Watch izay tokony ho fantatrao fa afaka manararaotra tsara kokoa ny zavatra atolotry ny Apple Watch anay
Rahampitso tonga amin'ny fomba ofisialy any amin'ny magazay ny Apple Watch Nike +
Notsapainay ny banky fototra sy angovo ho an'ny Choetech Apple Watch
Apple Music dia nahavita fifanarahana manokana tamin'ny marika Ministry of Sound
Ny marika mozika dihy malaza dia miaraka amin'ny lisitry ny playlist manokana ho an'ny Apple Music mba hanatsarana ny katalaogin'ny mozika an'i Apple.
Apple dia niafara tamin'ny fandoavana ny hetra rehetra nananany tamin'ny governemanta Irlanda
Noho ny antony manosika, na ny adidy tokony hataon'ny Vondrona Eropeana, dia niafara tamin'ny fandoavan-trosa tamin'ny governemanta Irlandaina i Apple.
Apple dia manolotra fampianarana efatra maimaimpoana ho antsika mba hitrandrahana betsaka indrindra amin'ny iPad amin'ny endrika e-book
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nandefa fampianarana efatra maimaimpoana maimaimpoana ao amin'ny app Book mba hananana tombony betsaka amin'ny iPad.
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny bateria lithium amin'ny fiaramanidina
Fantaro raha mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitondrana azy ireo amin'ny fiaramanidina sy ny fomba ary ny toerana tokony hitondranao azy ireo ny fitaovana elektronikao.
Ny onjan'i Siri dia mihetsika amin'ny feon'ny feontsika ao amin'ny Apple Watch Series 4
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia manana fahagagana ho antsika ao amin'ny Apple Watch Series 4 vaovao, ankehitriny ny onjan'ny Siri mihetsika amin'ny feontsika.
Apple dia namoaka ny watchOS 5.0.1 ho an'ny Apple Watch
watchOS 5.0.1 dia fanavaozana kely fotsiny amin'ny mahazatra izay manamboatra olana maro amin'ny famoahana tany am-boalohany (watchOS 5.0.0) tamin'ny herinandro lasa.
Vodafone ny bundle volontsôkôla miaraka amin'ny fampandehanana ny Apple Watch Series 4 LTE
Vodafone dia mandiso fanantenana ny mpanjifany indray amin'ny tsy fahafahany mampihetsika ny Apple Watch LTE ary tsy manome safidy hafa na fanazavana
Ny Apple Watch Series 4 dia manana bateria 20% kely kokoa saingy maharitra 18 ora isan'andro izany
Aorian'ny fanesorana iFixit, dia fantatra fa ny Apple Watch Series 4 vaovao dia manana bateria ambany kokoa noho ny Apple Watch Series 3.
Ahoana ny fomba hanerena fampiharana akaiky ao amin'ny watchOS 5
Fitsapana ny fanoherana ny fianjerana sy ranoka miaraka amin'ny iPhone XS sy XS Max
Araka ny efa nampoizina, ny iPhone Xs sy ny iPhone XS Max vaovao dia nandalo fitsapana fitetezana rano sy ranoka samihafa.
Ny fiasa izay hita fa latsaka amin'ny Apple Watch Series 4 dia tsy mandeha raha tsy 65 taona ianao
Apple dia manangona andiana hevitra amin'ny haino aman-jery amin'ny Apple Watch Series 4
Aorian'ny fividianana Beddit, ny serivisy fanarahana torimaso, Apple dia manomana ny hanidy ny rahony
Apple dia manomboka mahazo tànana amin'ny Beddit, ilay orinasa mpanara-maso torimaso izay nalainy herintaona lasa izay tamin'ny fanidiana ny serivisy Beddit Cloud.
Ny HomePod dia mitaky 70% amin'ny varotra avo lenta an'ny mpandahateny
Hamafiso rehefa mandeha ny volana, ny homePod dia mametraka ny tenany ho safidy avo lenta amin'ny tsenan'ny mpandahateny mahay.
Apple dia miasa miaraka amin'ny Health Canada hitondra Apple Watch EKGs eo amin'ny tsenan'i Canada
Taorian'ny fanombohana ofisialy ny Apple Watch Series 4, ny zava-drehetra dia manondro fa ny fiasan'ny electrocardiogram vaovao dia hahatratra ny tsena kanadiana ihany koa.